Shina mpanamboatra moteaux PCB, onjan-tsolika matetika PCB, Bare Copter microwave PCB, avo lenta PCB
Description:PCB Microwave,PCB Frequency PCB,Bare Copper Microwave PCB,PCB Frequency avo,,
Home > Products > PCB Microwave
Ny vokatra avy amin'ny PCB Microwave , mpanofana manokana avy any Shina, PCB Microwave , PCB Frequency PCB mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Bare Copper Microwave PCB R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
2 layer Microwave PCB  Contact Now
FR4 Microwave Frequency PCB  Contact Now
Bare Copper Microwave Frequency PCB  Contact Now
Min trace PCB Frequency PCB  Contact Now
Microwave PCB dia karazana PCB natao hanamboarana famantarana amin'ny megahertz mankany gigahertz frequency frequency (fahatany antonony matetika amin'ny frezy avo lenta) .Bare Copper PCB, White Solder Microwave PCB . Na inona na inona...
Ny ankamaroan'ny MC PCB dia ny Aluminum PCB , ny Aluminium dia manana famindrana hafanana tsara sy fahaizana manafoanana, fa mora noho ny varahina miorina amin'ny PCB.Misy mpanjifa nanontany teny ho an'ny MC PCB fa tsy misy...
Lazainay fa matetika ny RF PCB sy ny microwave PCB a izy ireo dia fitaovana manokana ihany koa fa tsy mahazatra FR4 .Ny fananana Taconic, Rogers, F4B, F4BM.PTFE amin'ny stock.Raha izao, afaka ataontsika haingana ny birao manokana. .Tena toy ny...
Min trace PCB Frequency PCB
Stom Circuit dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary famokarana faobe amin'ny MCPCBs misy sosona, izay azo ampiasaina amin'ny jiro valva, rindrina jiro, jiro, fanilo, sns .. Mandrakotra faritra 12000 m2,...
Shina PCB Microwave mpamatsy
microwave PCB's dia karazana PCB natao hanamboarana famantarana amin'ny megahertz ho an'ny gigahertz frequency frequency (antonony miova ho an'ny avo lenta avo lenta). Ireo zotram-pifaneraserana ireo dia ampiasaina amin'ny marika fifandraisana amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny finday mankany amin'ny radara miaramila. Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana ireo PCB's dia ireo karazan-dahatsoratra tena ilaina amin'ny tsy tapaka dielectric (Er), very haingo, ary CTE (miasa tsara amin'ny fanitarana ny hafanana).
Ny fitaovam-pandrefesana haingam-pandeha avo lenta miaraka amin'ny Er tsy miova ary avelao ny fahazoana mivezivezy amin'ny alàlan'ny mari-pahaizana hafainganam-pandeha ambony dia mandehandeha amin'ny PCB miaraka amin'ny tsy fahita firy noho ny fitaovana PC-fenitra PC-4. Ireo fitaovana ireo dia azo afangaro ao amin'ny Stack-Up mitovy amin'ny fampisehoana farany sy ny toekarena.
Ny tombony amin'ny fampiasana fitaovana miaraka amin'ny X, Y ary Z CTE dia rafitra PCB vokarina izay hitoetra ho tsy miova amin'ny tontolo misy haavo raha toa ka miasa hatramin'ny 40 GHz amin'ny fampiharana analog. Izany dia mamela ny fametrahana mahomby amin'ny singa faran'izay tsara indrindra, ao anatin'izany, amin'ny tranga sasany, dia miteraka faty. Ankoatr'izay, ireo fitaovana CTE ambany dia hanamora ny fampifanarahana ny takelaka maromaro sy ny endrik'izy ireo aseho amin'ny PCB Layout sarotra.
.CTEr = + 40 / + 50 ppm isaky ny C (ambany); Tg (hafanana famindrana fitaratra) dia 280 ° C
.ER = 3.38 / 3.48 amin'ny 10.0 GHz
.ER tsy miova hatramin'ny 40,0 GHz
.ED (electro-deposited) varahina ihany
.Mehy ny haavon-tsivony-amin'ny-layer = +/- 0.001
.Ny vidin'ny fanodinana dia mahazatra amin'ny fampitomboana kely
PCB Microwave PCB Frequency PCB Bare Copper Microwave PCB PCB Frequency avo Microwave PCB